फिल्म हेर्दा जापना लैजाने ‘माई लभ’ टोली चितवनमा – Saurahaonline.com
फिल्म हेर्दा जापना लैजाने ‘माई लभ’ टोली चितवनमा
चितवन, २६ मंसिर । नेपालमा गएको महाबिनाशकारी भुकम्पको बेला नेपालमा भएको समस्या लगायत भुकम्प जादा जापानले गरेको सहयोगको कथामा आधारित चलचित्र ‘माई लभ’ यसै साता अर्थात् २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्र युनिट अहिले प्रदर्शन मिती नजिकिदै गर्दा मोफसलमा प्रमोशन क्रममा हिडीराखेको छ । प्रमोशनको क्रममा हिजो सोमबार फिल्म युनिटले चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मको बारेमा जानकारी गराएको छ । साथै फिल्मको नाम र प्रदर्शन मिति अंकित ज्याकेट पनि वितरण गरेको छ ।
फिल्मका अभिनेता तथा निर्माता गणेश लामाले ‘माई लभ’ एउटा सामान्य फिल्म मात्र नभएर आगामी पुस्ताका लागि एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत भएको बताए । भुकम्पपछि जापानले देखाएको सहानुभुती र सहयोगको कथा फिल्मले पेश गरेको जानकारी गराएका थिए ।
उता यो फिल्मका जापान र नेपालको मिडिया संयोजक दीपेन्द्र डुंग तामाङले ‘माई लभ’ हेरिसकेका दर्शकहरुमध्ये गोलाप्रथाद्वारा भाग्यशाली एक जनालाई जापान जाने अवसर दिने भएको छ यसको लागि फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकले टिकट नं. र हलको नामसहित ‘माई लभ’को फेसबुक पेजमा इनबक्स गर्नुपर्नेछ । एक जना भाग्यशाली दर्शकले आगामी अप्रिल २५ तारिखमा जापानमा हुन लागेको ‘माई लभ’को प्रिमियरमा सहभागी हुने मौका पाउने बताएका छन् ।
फिल्मलाई डा. तोसिआकी इतोहले निर्देशन गरेका हुन् । गणेश लामा, शितल श्रेष्ठ, रिवन मित्सुतानी लगायतका कलाकारहरुले फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । चलचित्रमा समाबेश गीतहरु दर्शकमाझ छोडिसकेको फिल्मले गीतसंगीत र ट्रेलरबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया समेत पाईराखेको छ ।